दिदीले पुतीबाट सेतो पानी झारेको त्यो रात - Nepali Sex Tube
ठूलोममीकी जेठी छोरी, अर्थात मेरी दिदी मनिता म भन्दा ११ वर्षले जेठी हुनुहुन्थ्यो। दिदी १४-१५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै स्कुल पढ्ने भएकाले स्कुल संगै जान्थ्यौ। होमवर्क गर्दा म दिदीसंगै बस्ने गर्थे। घरमा बस्दा दिदी जहिलै कालो रंगको पातलो स्कर्ट लगाउनुहुन्थ्यो। किनकी स्कर्ट लगाएर भुइमा बस्न सजिलो हुने रहेछ।
ठूलोममी र ठूलोबा तल्लो तलामा बस्ने अनि खासै माथी नआउने भएकाले हामी होमवर्क गर्न बस्दा पढाइ भन्दा गफ बढी गर्थ्यौ। कहिले काही म दिदीसंगै उहाँकै रुममा सुत्थे। दिदीसंग सुत्न मलाइ एकदम मन पर्थ्यौ। उहाँ जहिल्यै अगालो हालेर सुत्नुहुन्थ्यो। दिदी टाँसिदा दिदीको छाती नरम महसुस हुन्थ्यो। अनि उहाँको तातो अगालोमा आलिंगन हुँदा उहाँको निकै मिठो कामुक बासना आउँथ्यो। कहिले काहीँ मेरो पिसाब फेर्ने तुरी एकाएक ठन्किएर ठूलो हुन्थ्यो। अनि दिदीले थाहा पाउनुहोला भनेर दिदीलाइ तल्लो भागले नछोइ अगालोमा बेरिन्थे। दिदीको त्यो समिप्य यति प्यारो थियो कि – लाग्थ्यो सारा जीवन त्यही अंगालोमै बेरिएर बसिरहुँ।
एकदिन दिदी पर सर्नु भयो। त्यहीँ कारण दिदी अर्कै कोठामा सुत्ने भएकाले त्यो बेला म उहाँ निर जान पाएनँ। तर केही दिनपछि पुगे। दिदी आफ्नै कोठामा सरिसक्नु भएको थियो। तर, मलाई यो पर सर्ने के हो थाहा थिएनँ। होमवर्क गर्दा गर्दै मैले दिदीलाई पर सर्ने भनेको के हो भनेर सोधेँ।
दिदीले ‘मिन्स भ’कोलाई हो त्यस्तो भन्ने। हामी केटीहरुको एक-एक महिनामा भइरहन्छ’ भन्नुभयो।
मैले बुझिनँ। के हो मिन्स भनेर सोधेँ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘भोलिपर्सी तैले हेल्थमा पढ्न पाउछस्, अनि बुझ्लास।’
दिदीले दिएको उत्तरले मलाई चित्त बुझेनँ। मैले उहाँलाई बुझाइदिन प्रेसर गरे।
उहाँले दिक्क मान्दै भन्नुभयो – ‘खैै कसरी बुझाउने! केटीको पिसाब फेर्ने ठाउँबाट रगत आउँछ महिना/महिनामा, त्यही हो।’
मैले छ्या भनेर नाक खुम्च्याएँ।
अनि दिदीले भन्नुभयो, ‘तैले सेक्स भन्ने सुनेको छन्? हो त्यो गरेर बच्चा जन्मिन्छ, अनि मिन्स सुरु भएको केटीले मात्र बच्चा जन्माउन सक्छ।’
मलाई यो कुरा सुन्न निकै लाज र अप्ठ्यारो लाग्यो अनि मनमनै कौतुहलता पनि।
अनि मैले नखरा पार्दै सोधिहाले – ‘के हो त सेक्स भन्या?’
‘अलिक लाजमर्दो कुरा हो। ठूलो भएपछि आफै बुझ्छन्, अहिले बेला भ’को छैन।’ दिदीले यतिमै कुरा टार्न खोज्नुभयो।
मैले दिदीको काखमा आफ्नो टाउको अड्यायर अहिले नै भन्नु न भनेर जिद्धी गरे।
दिदीले भन्नुभयो ‘पुति भनेको सुनेको छस्?’
मैले स्कुलमा केटाहरु बोलिरहेको सुनेको कारण भनेँ – ‘खै केटीको पिसाब फेर्ने ठाउँ होला नि।’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो – ‘अँ त्यहीँ हो । त्यहाँ प्वालबाट बच्चा जन्मिन्छ पछि।’
म छक्क पर्दै भनेँ – ‘बाफ रे! त्यत्रो ठूलो प्वाल पो हुन्छ?’
उहाँले भन्नुभयो – ‘होइन, सानै हुन्छ ।’
‘अनि बच्चा चाहि कसरी हुन्छ त?’
‘त्यही त भन्दै छु, लाडो भनेको सुनेको छस्।’
‘अँ, छ्या सुनेको छु।’
‘हो, त्यो लाडोले केटीको पुतिमा छिराएर सेक्स गर्न मिल्छ। अनि बच्चा बस्छ।’
‘तपाइलालाई कसरी थाहा भयो त? तपाइले पनि गर्नुभएको छ र त्यस्तो?’
‘छैन, मैले किताबमा पढेको। लिङ्ग र योनी भन्छ। लाडो र पुति चाहिँ नेप्परिएको बोलोचालीमा भन्छ। फेरी भन्दै हिड्लास नि!’
‘भन्दिन, यस्तो कुरा नि कसले भन्दै हिड्छ र?’
दिदीसंग यस्तो गफ गर्दा खै किन मेरो तुरी कडा भएको थियो।
दिदीको काखमा टाउको राख्दा म उत्तानो परेको थिए। कट्टु नै छेडेर माथी उठेछ। दिदीले देख्नु भयो।
दिदीले मेरो टाउको मुसार्दै भन्नुभयो – ‘तेरो त ठूलो भएछ नि! खै त देखा त।’
खै किन हो कुन्नी मलाई मेरो तुरी दिदीलाई देखाउन निकै हतार भएजस्तो भयो। मैले आफ्नो कट्टु खोलेर ठनक्क भएको तुरी माथीतिर फर्काएर दिदीलाई देखाएँ अनि लाज लागेर फेरि कट्टु लगाइहाले।
त्यो रात दिदीले मलाई आफूसंग संगै सुत्न भन्नुभयो। मैले किन नाई भन्थे र। राती दिदी कुनातिर फर्केर सुत्नुभएको थियो। अनि मलाई पछाडीबाट अंगालो हाल्न भन्नुभयो।
मैले दिदीलाई पछाडीबाट अंगालो हाले। दिदीको छातीको बुबु मेरो हातले छोइरहेको थियो।
दिदीले भन्नुभयो ‘चलाइदिन्छन् मेरो बुबु?’
मैले केही नबोली दिदीको देब्रे बुबु समातेर हेरेँ। बुबु निकै गिलो र नरम तर निकै टाइट थियो। मैले दिदीको बुबु चलाउँदै गर्दा त्यो झन टिनिक्क भएर साह्रो हुँदै गयो। दिदीले लामो लामो स्वास फेर्न थाल्नु भयो।
साउतीको स्वरमा दिदीले ‘कान्छु, मेरो स्कर्ट भित्र हात छिरान…’ भन्नुभयो।
मैले हव्स् भन्दै दिदीको स्कर्ट भित्र हात हालेँ। दिदीले भित्र केही पनि लगाउनु भएको थिएन।
हात भित्र लैजाँदा ज्वरो आएझैँ उहीँको टाङ निकै तातो भैरहेको थियो। मैले अझ भित्र लग्दा दिदीको योनीको रौंहरु भेटेँ। मैलो दिदीलाई साउती लाउँदै भनेँ – ‘यस्तोमा पनि कपाल हुने रहेछ त है।’
‘उहाँले बिस्तारै बोल्दै भन्नुभयो – ‘अँ, अझै तल जा न।’
मेरो हातैभरी चिप्लो पानी लाग्यो। अनि एकछिन पछि निकै तातो, नरम, मुलायम र कस्तो कस्तो चिरो पारेको छाला भेटेँ। चिराको बिचमा हल्का खाल्टो थियो।
म उत्सुक हुँदै दिदीलाई सोधेँ – ‘दिदी यही हो पुति?’
‘अँ, बिस्तारै चलान त्यहाँ’ भनेर दिदीले स्स्स… अह्ह्ह… गरेर स्वास लामो सास लिन थाल्नुभयो।
दिदीको पुठोमा टाँसिएको मेरो तुरि ठनन्क भएर कट्टु छेड्ला जस्तो हुन थाल्यो।
मैले दिदीको पुतिमा औलाले चलाउँदै मुसार्न थाले। अनि बिस्तारै प्वाल भित्र घुसार्दै निकाल्दै गरेँ। दिदी लामो लामो सुस्केरा हाल्दै छटपटिँदै हुन्थ्यो।
करिब १५ मिनेटपछि दिदी बोल्नुभयो – ‘कान्छु, एउटा कुरा मान्छस्?’
दिदीको कामुक स्वरले म जे भने पनि मान्ने अवस्थामा थिएँ । त्यसैले दिदीलाई ढाडस दिँदै भनेँ ‘अँ… मान्छु ।’
‘तैले औलाले गरेको जस्तै तेरो जिब्रोले गर्न सक्छस्?’
मैले अघिनै पडाडीबाट दिदीको पुति चिप्लो पार्न औला चाट्दै पुति चलाउँदै गरेको थिएँ। तर नखरा पार्दै छ्या घिन लाउँछ भनेँ।
दिदीले मलाई फकाउन लाउनुभयो गर्दे न कान्छु।
मैले ‘हुन्छ’ भन्दै दिदीको स्कर्टभित्र टाउको छिराएर दिदीको भिजिको पुति चाट्दै चुस्न थाले।
निकै बेर मेरो जिब्रोले चालपछि दिदीको पुतिबाट थुप्रै चिप्लो र सेतो महीँ जस्तो पानी निस्कियो। म अचम्ममा परेँ अनि चाट्न छोडिदिएँ। दिदी मलाई कस्सेर मुखमा म्वाँई खानुभयो र भन्नुभयो – कति मजा भाथ्यो। भोली तेरो तुरी यहाँ हालेर सेक्स गर्ने है।
मलाई लाज लाग्यो त्यसैले केहीँ नबोली बसिरहेँ। दिदीले कति मज्जा आउँछ मान न मेरो कान्छु भनेपछि मैले टाउको हल्लाएर स्विकार गरेँ। त्यसपछि दिदी खुसी हुँदै मेरो मुखमा फेरि म्वाँई खाएर मेरो ठन्किएको तुरीमा हात पुर्‍याउनुभयो। मलाई कता हो कता सिरिङ्ग सिरिङ्ग हुँदै थियो तर त्यसपछि कतिखेर निदाएछु पत्तै भएनँ।